ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာ အသားကျခဲ့တဲ့ ကျနော့်ဘဝကို လွမ်းတယ် ဆိုပီးထုတ်ပြောလာတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသား အလင်းရောင် – Shwe Likes
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာ အသားကျခဲ့တဲ့ ကျနော့်ဘဝကို လွမ်းတယ် ဆိုပီးထုတ်ပြောလာတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသား အလင်းရောင်
Shwe | April 6, 2022 | Celebrity | No Comments
အမျိုးသမီး ပရိတ်သ တ်များရဲ့ ရင်ထဲ အသည်း စွဲနေအောင် ချစ်ခင် အားပေးရတဲ့ မြန်မာအ မျိုးသား အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးကိုေ ဖာ်ပြပါ လို့ဆိုလာရ င်တော့ အလင်းေ ရာင်ကို ချန်ထားခဲ့လို့ လုံးဝမရပါ ဘူး။
သူ့ရဲ့ တည်ကြည်ခန့်ညားမှုနဲ့ ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာ ကြောင့် ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့ ချစ်ခင်အားေ ပးမှုကို ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိကာလမှာ ပြည်သူနဲ့ တသားတည်းရပ် တည်ခဲ့ တဲ့အတွက် သူဟာ အဝေးတ စ်နေရာမှာ ခေတ္တရှောင် တိမ်းနေတာြ ဖစ်ပါတယ်။
ပြည်သူနဲ့ တသား တည်းရပ်တည်ခဲ့ တဲ့ ပရိတ်သတ်အသ ည်းကျော် မင်းသား အလင်းရောင် ဟာ ယမန်နေ့က သူ့ရဲ့ Facebook စာမျ က်နှာပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ ခံစားချ က်အချို့ကို ရေးသားဖော်ြ ပလာခဲ့ပါတယ်။ရေးသားေ ဖာ်ပြလာခဲ့တဲ့အကြော င်းအရာ ကတော့ လက်ရှိ မှာ အနုပညာလု ပ်ငန်းတွေ ရပ်နားထား ရပြီး ရိုက်ကွင်းများနဲ ့ပတ်သက်ပြီး သူခံစားရတဲ့ ခံစားချက် များကိုဖွင့်ဟေ နတာဖြစ်ပါတ ယ်။
သူရေးထား ကတော့ လွမ်းတယ် …မနက်မိုးလ င်းတာနဲ့ အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့ ရှုတင်ထသွားရတာ လွမ်းတယ်။5432 1 အက်ရှင် ဆိုတဲ့ အသံကို လွမ်းတယ်။ မျက်စိစူးမတတ် မီးရောင်ေ တွကို လွမ်းတယ်။ ကင်မရာ shutter ပိတ်သံ တချပ်ချပ်ကို လွမ်းတယ်။ မော်နီတာကနေ မျက်မှောင် ကြုံ့ကြည့်တဲ့ ဒါရိုက်တာကိုလဲ လွမ်းတယ်။
ကိုယ် မရိုက်ရသေးခင် ခိုးအိပ် ရတာကို လွမ်းတယ်။ မင်းသား ဘာစားချင်လဲဆိုတဲ့ ရှုတင်မ န်နေဂျာကြီး အသံကို လွမ်းတယ်။ အမြဲတမ်း မိသားစုလို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံပြေး ကတဲ့ စက်အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလဲ လွမ်းတယ်။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန် အလုပ် ပြန်လည်ပတ်ေ နကြတာမြင်တော့ ဆယ်စုနှစ်တ စ်ခုစာ အသားကျခဲ့တဲ့ ကျနော့်ဘဝကို လွမ်းတယ်။
ဒီအိပ်မက်တွေ ပြန်မက်ခွင့်ရှိဦးမှာလား? သမားရိုးကျလောကကြီးကနေ ပျောက်ကွယ်နေရတဲ့ ကျနော့်ကို မေ့လျော့သွားကြပြီလား?
ကျနော်ကတော့ သိပ်သတိရတယ်။ အတိတ်ကနေ့ရက်တွေဆီ
အခွင့်ရှိခဲ့သေးလျှင်” ယူ၍ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်လေး ပရိတ်သတ်နဲ့ အမြန်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ။ Credit;
အမ်ိဳးသမီး ပရိတ္သ တ္မ်ားရဲ့ ရင္ထဲ အသည္း စြဲေနေအာင္ ခ်စ္ခင္ အားေပးရတဲ့ ျမန္မာအ မ်ိဳးသား အႏုပညာရွင္ေတြထဲက တစ္ဦးကိုေ ဖာ္ျပပါ လို႔ဆိုလာရ င္ေတာ့ အလင္းေ ရာင္ကို ခ်န္ထားခဲ့လို႔ လုံးဝမရပါ ဘူး။
သူ႔ရဲ့ တည္ၾကည္ခန႔္ညားမႈနဲ႔ ထူးခၽြန္တဲ့ အႏုပညာ ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေ တြရဲ့ ခ်စ္ခင္အားေ ပးမႈကို ရရွိခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာလမွာ ျပည္သူနဲ႔ တသားတည္းရပ္ တည္ခဲ့ တဲ့အတြက္ သူဟာ အေဝးတ စ္ေနရာမွာ ေခတၱေရွာင္ တိမ္းေနတာျ ဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူနဲ႔ တသား တည္းရပ္တည္ခဲ့ တဲ့ ပရိတ္သတ္အသ ည္းေက်ာ္ မင္းသား အလင္းေရာင္ ဟာ ယမန္ေန႔က သူ႔ရဲ့ Facebook စာမ် က္ႏွာေပၚမွာ သူ႔ရဲ့ ခံစားခ် က္အခ်ိဳ႕ကို ေရးသားေဖာ္ျ ပလာခဲ့ပါတယ္။ေရးသားေ ဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့အေၾကာ င္းအရာ ကေတာ့ လက္ရွိ မွာ အႏုပညာလု ပ္ငန္းေတြ ရပ္နားထား ရၿပီး ရိုက္ကြင္းမ်ားနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး သူခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ မ်ားကိုဖြင့္ေဟ နတာျဖစ္ပါတ ယ္။
သူေရးထား ကေတာ့ လြမ္းတယ္ …မနက္မိုးလ င္းတာနဲ႔ အိပ္ခ်င္မူးတူး နဲ႔ ရႈတင္ထသြားရတာ လြမ္းတယ္။5432 1 အက္ရွင္ ဆိုတဲ့ အသံကို လြမ္းတယ္။ မ်က္စိစူးမတတ္ မီးေရာင္ေ တြကို လြမ္းတယ္။ ကင္မရာ shutter ပိတ္သံ တခ်ပ္ခ်ပ္ကို လြမ္းတယ္။ ေမာ္နီတာကေန မ်က္ေမွာင္ ၾကဳံ႕ၾကည့္တဲ့ ဒါရိုက္တာကိုလဲ လြမ္းတယ္။
ကိုယ္ မရိုက္ရေသးခင္ ခိုးအိပ္ ရတာကို လြမ္းတယ္။ မင္းသား ဘာစားခ်င္လဲဆိုတဲ့ ရႈတင္မ န္ေနဂ်ာႀကီး အသံကို လြမ္းတယ္။ အျမဲတမ္း မိသားစုလို ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံေျပး ကတဲ့ စက္အဖြဲ႕သားေတြအားလုံးကိုလဲ လြမ္းတယ္။ ကိုယ့္မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္ အလုပ္ ျပန္လည္ပတ္ေ နၾကတာျမင္ေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္တ စ္ခုစာ အသားက်ခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ဘဝကို လြမ္းတယ္။
ဒီအိပ္မက္ေတြ ျပန္မက္ခြင့္ရွိဦးမွာလား? သမားရိုးက်ေလာကႀကီးကေန ေပ်ာက္ကြယ္ေနရတဲ့ က်ေနာ့္ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကၿပီလား?
က်ေနာ္ကေတာ့ သိပ္သတိရတယ္။ အတိတ္ကေန႔ရက္ေတြဆီ
အခြင့္ရွိခဲ့ေသးလၽွင္” ယူ၍ျဖစ္ပါတယ္။ အလင္းေရာင္ေလး ပရိတ္သတ္နဲ႔ အျမန္ဆုံးေပ်ာ္ရႊင္စြာျပန္လည္ဆုံေတြ႕နိုင္ပါေစ။ Credit;
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာများ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး ရန်ပုံငွေ မြှင့်တင်ပွဲ မှာ တွေ့ရတဲ့ အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်
ကဲ…….အမေရီးကားရောက်တုန်း ကျနော် ခရီးထွက်လို က်ဦးမယ်ဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်